Iingcebiso zethu ezincedo kwimpilo yabasetyhini ziya kunceda ukubuyisela ubungqina kunye nempilo.
Ngaba ukulawulwa kweepilisi ngexesha elizayo kunokuchaphazela ukukhulelwa komntwana?
Hayi, abanako. Ii-COC (ezidibeneyo zokukhulelwa komlomo), ngokuchasene neengcinga eziqhelekileyo, aziphambuki kwinkqubo ye-hormone yowesifazane kwaye ayichaphazeli inkqubo yokuzala. Ingundoqo yesenzo sabo ikhusela i-ovulation ngexesha lokuthatha iziyobisi. Akukho liqanda elivuthiweyo - akukho nethuba lokukhulelwa umntwana. Emva kokuyeka ukwamkelwa kwemithwalo yokukhulelwa, umjikelezo wokuvuthwa kweqanda ubuyiselwa, ngokuqhelekileyo kwisithuba seenyanga ukuya kweenyanga ezintathu-konke kuxhomekeke kwimpawu zomzimba ngamnye. Ukongezelela, kukho into enjengokuthi "ukucinywa komsebenzi": kwamanye amabhinqa amathuba okukhulelwa emva kokuyeka ukuthatha izithintelo zokukhulelwa (kwimijikelezo yokuqala emva koko) iyakhula, njengoko ama-ovari aqala ukusebenza ngokunyanisekileyo. Kodwa apha, nayo yonke into iyodwa. Ngoko ke, ukhethe ulwaphulo-mali kufuneka kuphela ugqirha kuphela.
Ndabeletha umntwana omkhulu-ngaphezu kwe-4 kg. Sekude kubekho ixesha elide, kodwa iinyanga ezimbalwa ezedlule zaqala ukuphawula imiphumo yokuzalwa okunzima: kunye nokuxhatshazwa kwesisu kusenomvakalelo we-raspiraniya kwaye udonsa intlungu kwi-perineum. Emva koko, andinakuyilahla isitya. Yintoni endiyenzayo?
Inokwenzeka ukuba , wena-ukwehla kweendonga zesini. Zisebenzise iingcebiso ezisebenzayo kwimpilo yabasetyhini. Emva kokuzalwa komntwana omkhulu, amanina ahlala eqhagamshelana nale nto. I-mucosa yangasini ihlala igxininiswe, imisipha yomgangatho weplavic kunye nezicubu ezixhumeneyo zibuthathaka (emva komthwalo onzima umtya wabo kunye nokunikezelwa kwegazi ziphazamiseka). Ngokuqhelekileyo oku kuchaphazela ubomi obusetyhini obusetyhini. Kodwa imeko iyafumaneka. Okokuqala, kufuneka wenze idibaniselwano kunye nomdlavuza wezinja. Iingcali ziza kugqiba idilesi yokungaphumeleli kwaye zicebise indlela efanelekileyo yokonyango: i-conservative okanye ukusebenza. Iyokuqala isetyenziswe ngezinga elilula lokungaphumeleli kunye nokuthatha umzekelo, umzekelo, umqobo wokuzikhandla ngokomzimba kunye ne-gymnastics yokunyanga.
Ngeenguqu ezichaziweyo, iplastiki yeendonga zesisu isetyenziswa. Ukusebenza kukuvumela ukuba ubalekele ngemiphumo engathandekiyo yokuzalwa okunzima, ukubuyisela ithoni kunye nokunyaniseka kwezicubu, indawo eqhelekileyo yamalungu epilvic. Ngamanye amaxesha kule nto inetyenziselwa umnatha othile okhethekileyo, osebenza njengesakhelo, efakwe phantsi kwebhubhane le-vaginal: ngale ndlela inzala iyancitshiswa ibe yindawo kwaye ukuphuhliswa kwayo kwangaphambili kuyathintelwa.
Kwiinyanga ezintandathu zokugqibela ndixhala malunga nokubonakala kwamagqabha emigodini ngexesha lezemidlalo kwaye nkqubela. Ulawulo lwenkqubo alusebenzi. Le meko ingayilungiswa njani?
Mhlawumbi unako ukungcola kwamanzi okungcola (okanye uxinzelelo). Ingxaki idla ngokubakho ngobudala, xa i-sphincter (i-muscle ejikeleze umgodi, kule ngxaki-i-urethra) inobuthakathaka kwaye ayikwazi ukunciphisa ngokupheleleyo, ukukhusela ukukhutshwa ngokungabandakanyeki komchamo. Ukungaphumeleli kwimizimba ye-pelvic okanye iindonga zesini kubangela imeko. Iyakunqandwa ngukuhlinzwa, oko kuthiwa "ukulinganisa" ukusebenza: iteksi yokwenza ilungisa i-urethra kwindawo echanekileyo, ukulungisa ukungaphumeleli emsebenzini wakhe we-sphincter. Kweminye imiba yeemeko zakho kuya kunceda ukuqonda ingcali, ngoko kufuneka u tyelele umgulane oza kukuxelela malunga neengcebiso ezifanelekileyo ezinempilo yabasetyhini.
Ngexesha elide ndiyisebenzisa i-antiseptics kummandla osondeleyo. Ukusetyenziswa okuzimeleyo kwezi ziyobisi kunokuchaphazela impilo?
Ukukhethwa kweendlela zokugcina ucoceko obusondeleyo, zonke ziyahlukana zibe ngamaqela amabini: i-cosmetic and antiseptic. I-Cosmetic ayiphuli i-microflora yangasese ngenxa yokungabikho kwamacandelo okulwa ne-antibacterial. Kodwa i-antiseptic yenziwe ukuba ihlambulule i-mucous kunye nekhumba kwiibhaktheriya, isetyenziselwa unyango. Ukusetyenziswa kwezi zonyango ngaphandle kokunconywa kwegqirha kunokukhokelela kwisisu se-dysbiosis. I-Antiseptics - izisombululo zeekhemikhali ezinobundlobongela, ukusetyenziswa kwazo okungalawulwayo kunokubangela ukunyamezela, ukoma kunye nokubonakala kwe-microcracks kwi-mucosa.
Ndakuva ukuba emva kokufaka ukuvutha kwithuba elithile awukwazi ukulala ngesondo kunye nemidlalo. Kutheni kwaye lide kangakanani ixesha lezithintelo?
Umoya ngumzimba wasemzini wezilwanyana, apho kuthatha ixesha ukuba ufunde. I-spasms kunye neentlungu kwisisu esisemva kweeveki zokuqala emva kokufakela kwayo - ubungqina bokuba isibeleko sizama ukusigxotha, siphume ngaphandle into yangaphandle. Akusiyo ize ukuba umoya usungulwe ngexesha lokuya esikhathini: isalathisi somlomo wesibeleko (idibanisa i-uterine cavity kunye nesondo) ivuliwe kancane, eququzelela ukuqaliswa kwayo, kwaye ukuphendula kwesibeleko kwizinto zangaphandle ngexesha lokuya esikhathini kuncinci. Ukuze usetyenziswe kwimimandla emitsha, umzimba ufuna ubuncinane inyanga - kungenxa yeli xesha kufuneka ulinganise umsebenzi wakho kunye nesondo. Ngaphandle koko, ifowuni inokuphela.
Amazinyo kunye nezifo ezininzi eziyingozi
Izityalo ezisetyenziswayo kwiinkcubeko zabantu
Impilo enhle ngethuba lokuqala lokukhulelwa
Izipho zintsana. Iingcebiso kunye neengcebiso
Pizza Dough Classic
Ukunyamekelwa kwezindlu zokuhlala: bokarneya
UTina Kandelaki wayenelisekile kwisigqibo se-IOC malunga neRashiya yokungathobeli kwimidlalo yeOlimpiki-2018
Ukulahlwa ushukela kunye netyuwa
I-Pasta kunye ne-broccoli
Ulwimi oluxubileyo nge-tartar sauce
Iingcamango zangaphambili zomthi weKrisimesi, ezihlotshiswe ngongoma
Ukutya kwesiFrentshi ukukhulelwa kwentombazana